Su'aal: Siigada dhibka ay keento?
Author Topic: Su'aal: Siigada dhibka ay keento? (Read 2855 times)
« on: October 21, 2018, 09:00:10 PM »
Asc wllaha ka shaqeeya bogan waxaan qabaa su-aal siigada dhibka ka soo gaadha malaga yaabaa inuu ruuxu ka soo kabto markuu joojiyyo sida biyo baxa degdeg ah iyo muuqaal xumida ilawshaha etc mahadsanidiin
Re: Su'aal: Siigada dhibka ay keento?
« Reply #1 on: March 17, 2019, 09:59:03 PM »
Siigadu waxay ka mid tahay caadooyinka haddii la joojiyo laga soo kabsan karo waxyelladeeda, faahfaahinta cilladaha laga dhaxlo siigeysiga ka akhriso qoraalkaan: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=2209.0
Su'aal: Waxan jeclanlahaa in la ii iftiimiyo waxyeelada siigada iyo caafimaadka?
Started by FaaizBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 6294 March 07, 2011, 05:19:55 PM
Su'aal: Siigada hadaan iska badin ma qatar bay leedahay?
Views: 4475 June 17, 2015, 11:15:58 PM
Su'aal: Siigada makaa dhigi kartaa qof caato ah?
Views: 3217 October 16, 2015, 11:29:26 AM
Su'aal: Waa maxay faa'iidada ama khasaraha siigada?
Started by Ahmed MohamedBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 8277 March 04, 2015, 04:19:07 PM
Su'aal: Siigada ma keeni kartaa dheerar?
Views: 4177 May 06, 2018, 01:15:57 PM